पाँच करोड फेसबुक ‘अकाउन्ट’मा ह्याकर आक्रमण::Online News Portal from State No. 4
पाँच करोड फेसबुक ‘अकाउन्ट’मा ह्याकर आक्रमण
फेसबुकको ‘भ्यू-एज’ फिचरमार्फत उनीहरुले विभिन्न फेसबुक अकाउन्टमा नियन्त्रण लिन खोजेका थिए।
बागलुङ, १३ असोज- विश्व चर्चित सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका ५ करोड अकाउन्टमाथि ह्याकरले आक्रमण गरेका छन्। सुरक्षा त्रुटिका कारण करोडौं फेसबुक अकाउन्ट ह्याकरले आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोजेको फेसबुकका सिइयो मार्क जुकरबर्गले जनाएका छन्। फेसबुकको ‘भ्यू-एज’ फिचरमार्फत उनीहरुले विभिन्न फेसबुक अकाउन्टमा नियन्त्रण लिन खोजेका थिए। भ्यू-एज फिचरमा सार्वजनिक गर्न चाहेका पोस्टहरु मात्र फेसबुक प्रयोगकर्ताले देख्न सक्छन्। यो समस्या अहिले नियन्त्रणमा आइसकेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको फेसबुकले जनाएको छ। फेसबुकले यसबारे सरकारी सुरक्षा संयन्त्रलाई समेत जानकारी गराएको छ। फेसबुक प्रयोगकर्ताका सुरक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको बताउँदै फेसबुक प्रोडक्ट म्यानेजमेन्टका उप-प्रमुख गाइ रोसनले यस त्रुटिका लागि माफी मागेका छन्। उनले आफूहरु फेसबुक प्रयोगकर्ताका सुरक्षा र गोपनीयताको पक्षमा रहेको उल्लेख गरेका छन्।
प्रभावित को छन् ?
के हो भ्यू–एज ?